Wakiilka Jorginho oo si dadban fariin digniin ah ugu diray kooxda Chelsea – Gool FM
Wakiilka Jorginho oo si dadban fariin digniin ah ugu diray kooxda Chelsea
Dajiye July 8, 2021
(London) 08 Luulyo 2021. Wakiilka ciyaaryahanka khadka dhexe ee xulka qaranka Talyaaniga iyo kooxda Chelsea Jorginho, ayaa ugu digay naadiga reer London hadal xamaasad leh oo la xiriira mustaqbalka ciyaaryahanka.
Jorginho ayaa ku hoggaamiyay xulkiisa qaranka Talyaaniga inuu gaaro final-ka Koobka Qaramada Qaarada Yurub ee EURO 2020, kaasoo garoonka Wembley ay kula ciyaari doonaan dhigooda England Axada soo socota.
Jorginho oo dhaliyay rigooradii muhimka u aheyd xulkiisa Talyaaniga kulankii Spain ee semi-finalka ahaa, taasoo uu ku muteystay ammaan xoogan.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Blues ayaa qarka u saaran inuu ku guuleysto Koobka Qaramada Qaarada Yurub ee EURO 2020, xilli uu isla sanadkan kula guuleystay kooxdiisa Chelsea koobka Champions League.
Haddaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay wakiilka Jorginho ee João Santos, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Rigoorada uu tuuro Jorginho, wuxuu ku tababartaa 30 ama 40 jeer cashir kasta ee tababarada ah.”
“Qiimaha Jorginho ee suuqa waa 50 million euros, aan aragno haddii ay jirto cid u dhaqaaqeysa inay la saxiixato.”
“Haa, waxaan helnay xoogaa wicitaanno ah oo naga imanaya dhowr kooxood si ay u helaan saxiixiisa.”
Ahmiyadeenu waa cusbooneysiinta Chelsea, Jorginho wuxuu ku nool yahay waqtiyadii ugu muhiimsanaa xirfadiisa kubada cagta, taasoo aan sugayay 20 sano ah.”
Kooxda Real Madrid oo heshiis cusub ka saxiixatay mid ka mid ah xiddigaheeda... (Imise sano ayuu qalinka ku duugay?)